I-10 ze-Albhamu eziphezulu nge-World Famous Yo-Yo Ma
I-Yo-Yo Ma inomthala omkhulu we-library, ngoko ke kunzima ukukhetha i-albhamu oyithengayo (ngaphandle kokuba unakho ukhetho lokuthenga konke!). U-Yo-Yo Ma unet talente ngokwenene kwiindidi; akukho neyodwa ye-albhamu yakhe ye-crossover ayizange iphumelele. Uludwe oluphezulu lwe-10 lwee-Yo-Yo Ma-albhamu inikeza indawo ebanzi yezindlela zomculo ekufuneka ukhethe kuzo.
I-world-renowned cellist, uYo Yo Ma wenza ngexesha le-Academy of Music ye-155th Anniversary Concert ibhola kwi-Academy of Music ngoJanuwari 28, 2012 e Philadelphia, ePennsylvania. Ifoto nguGilbert Carrasquillo / FilmMagic
Le "albhamu engcono" ye-Yo-Yo i-albhamu iyamangalisa, kwaye ngokumangalisa, sithetha into engakholekiyo! Umculo wakhe ophezulu kunye neetalente kumvumela ukuba awele kulo naluphi na uhlobo olukhululekile. Ukuba uvele "uphupha umphezulu" womculo kaYo-Yo Ma, sicebisa ukuba uthenge le CD. Ngeengoma ezinjengomxholo ovela kwi "Crouching Tiger, Dragon Hidden Dragon", 1B ukusuka "kwi-Appalachian Journey", kunye neLibertango esuka "kuMoya weTango" (akukho-8 kuloluhlu), ungena ngokugqibeleleyo kwilizwe lomculo likaYo-Yo Ma.
Bright Baroque II
Ukuba uthanda ixesha leBaroque , uya kuthanda le CD. I-Yo-Yo Ma ibuyisela kwakhona, ukusebenza okungenasiphelo kweeqhekeza ezicwangcisiweyo kunye nezidlalayo ngoBach noBoccherini. Imizila ehamba phambili eyenziwa ngu Yo-Yo Ma kwiingoma ezinjenge-"Cantting Hunting" kunye ne "Wachet auf, ruft uns die Stimme" yindlela ecacileyo yokukhupha ingcinezelo nawuphi na usuku.
Hluleka kwiimvumi ezinobungozi zaseBrazil ngelixa utyisa indebe ye-cocoa eshushu okanye itiye kunye nephupha leparadesi. U-Yo-Yo Ma wabambisana kwaye wenza kunye namanye amacwecwe aphezulu ukuze enze le CD eyiyo. Nangona u-Yo-Yo Ma ekhuselekileyo, abaculi abafana noRosa Passos kunye noSergio no-Odair Assad bathatha isigaba esithile kwiingoma eziliqela. Kuthiwa ukuba umculo womculo kaYo-Yo Ma uvelisa okulungileyo kwabanye; le CD iqinisile kwizwi elo.
I-Bach: I-Cello Suites ayisithupha engekho
Akukho mqoqo womculo weklasi ogqityiweyo ngaphandle kwale CD. U-Yo-Yo Ma ngokugqithiseleyo uletha ebomini iingoma eziqhutyayo zeBach kangangokuthi wadala ngobuchule. Isiqwenga esiyithandayo kwaye mhlawumbi esidumileyo yiNombolo 1 kwiG Major - Prelude; kukho igama elinye kuphela lokulichaza - elipheleleyo. Ngu Yo-Yo Ma ngendlela yakhe ecacileyo.
Ngokungafani nee-albhamu zokuqala ezine, le CD ibonisa icala eline-Yo-Yo Ma. Iziqwenga zikaCharles Ives noLeon Kirchner zidibanisa kwaye zixakeka. Ukuba awuyena umqhubi waloo mculo, ungakhathazeki. Kwakhona kule albhamu yiyona edumileyo i-Preludes Three for Piano nguGeorge Gershwin kunye neeronatas ezimbini ze-clarinet nguLeonard Bernstein.
Ukuba ufuna umsebenzi omdala weklasi, le yile CD eyiyo. U-Yo-Yo Ma udlala imisebenzi kaHaydn, iSaint-Saëns, uShumanhuman, uDvorak, no-Elgar kunye neNgesi yeNgqungquthela yaseOrkey, i-Orchestra National d'Ile de France, iBavarian Radio Symphony Orchestra, i-Berlin Philharmonic Orchestra kunye ne-London Symphony Orchestra ngokulandelanayo. Ukusebenza ngokusuka entliziyweni kaYo-Yo Ma kuphefumula.
I-Brahms: I-Sonatas yeCello kunye nePiano
Yo-Yo Ma amaqela kunye nopiyano uEmmanuel Ax ukudala le CD ethandekayo. I-albhamu iqukethe ezintathu sonatas, op. 38, op. 99, kunye ne-op. 108. Bobabini uYo-Yo Ma no-Emmanuel Ax basebenza ngokuzonwabisa ngokufanelekileyo ukuzisa umculo weBrahms. I-talente yabo engavamile iyabonakala kwi-CD yonke; akukho mzuzu ophazamisayo.
Umphefumlo weTango - Umculo we-Astor Piazzolla
Ufuna ukuthatha ikhefu kumculo weklasikhi? U-Yo-Yo Ma wenza kule albhamu enomdla engakholwayo. Umculo wendalo we- tango owaziwa ngamazwe ngamazwe, i-Astor Piazzolla, umxube we-jazz kunye nesitayela seklasi. Umzila wokuqala, uLibertango, uqinisekile ukuba udide ngaphandle kwanoma ikuphi; imizila yayo evulekileyo iya kukunika i-goose-bumps.
Uhambo lweSilikhi Uhambo: Xa abahambi behlangana
U-Yo-Yo Ma uthatha it talente yakhe kwiindawo eziphakamileyo. Uhlola kunye nokuvavanya ngeengoma ezivela kumazwe kunye neendlela zorhwebo zeselk zakudala - ukusuka eChina ukuya eMbindi Mpuma ukuya kwiMntla Yurophu. Ukudibanisa okugqibeleleyo kunye nokulingana kwecandelo ngalinye ngumxholo wezobugcisa bukaYo Yo Yo kunye nobungcali balabo abambisene naye.
U-Yo-Yo Ma kunye no-Ennio Morricone badibanisa ukuhlaziya umculo omhle uMorricone owaziwayo. Uqulunqile ngaphezu kwekhulu lemifanekiso yefilimu, ngokugqithiseleyo "Okulungileyo, Okubi Neyingozi," "Kanye Kanye Kwixesha LaseMerika," kunye "Neziganeko ezingenakuthenjwa." Ingaba ungumtshatsheli womnxeba weyiphi na le mafilimu okanye abazange bababone, le CD ayiyi kukuyeka.
Indlela uWilliam Travis eyaba ngayo iTexas Hero kwi-Battle of Alamo
Ukujonga Isigama soLwazi lweLizwi